လှပတဲ့မျက်ခုံးတစ်စုံရရှိစေဖို့ လွယ်ကူမြန်ဆန်တဲ့ နည်းလမ်း(၉) သွယ်
9 Nov 2017 . 11:35 AM
လှပတဲ့မျက်ခုံးတစ်စုံရှိခြင်းက ကိုယ်ရဲ့နဂိုရှိရင်းစွဲမျက်နှာလေးကို အများအလယ်မှာ သိသာထင်ရှားစေပါတယ်။အခုခေတ်မှာလည်း မျက်ခုံးအလှကို မိန်းကလေးအများစုက ပိုမိုဂရုစိုက်လာကြပါတယ်။အဲလိုဂရုစိုက်လာတာနဲ့အညီ ထင်းထင်းလေးနဲ့ လှပသေသပ်ပြီး ပြီးပြည့်စုံတဲ့မျက်ခုံးတစ်စုံရရှိစေဖို့အတွက် ပြုလုပ်လာကြပါတယ်။ အခုဖော်ပြမည့်နည်းလမ်းလေးတွေက Beauty Saloon တွေ အပြေးအလွှားသွားစရာမလိုတဲ့အပြင် လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ အချိန်လည်းအရမ်းပေးစရာမလိုဘဲ အိမ်မှာပဲပြုလုပ်ပြီး အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ မျက်ခုံးလှလှတစ်စုံ ရရှိစေမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။
(၁) Oil တွေရဲ့အစွမ်း
သေးငယ်တဲ့ဖန်ပုလင်းထဲကို တူညီတဲ့ပမာဏရှိတဲ့ အုန်းဆီ နှင့် ကြက်ဆူဆီကိုရောနှောထည့်ကာ စားပွဲတင်ဇွန်းတစ်ဇွန်းစာ ထောပတ်သီးအဆီ ထည့်ကာ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေတစ်သားထဲဖြစ်သွားတဲ့အထိ မွှေပေးပါ။ ရရှိလာတဲ့ အရောအနှောကို Mascara ဘရပ်ရှ်(သို့) သင့်ရဲ့လက်ချောင်းလေးများကိုအသုံးပြုပြီး မျက်ခုံးမွှေးပေါ်သုတ်လိမ်းပေးပါ။ဒီနည်းလမ်းက မျက်ခုံးမွှေးကိုသန်စွမ်းလာစေရုံမက မျက်တောက်မွှေးကိုပါ ရှည်လျားလာစေပါတယ်။
ရှားစောင်းလက်ပတ် စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်းစာ၊ ကြက်ဆူဆီ စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်းစာ နှင့် ဗီတာမင်အီး ၂ တောင့်စာကို ရောနှောပေးပါ။ ထို့နောက် အိပ်ရာမဝင်ခင်မှာ ဘရပ်ရှ် (သို့) သင့်ရဲ့လက်ချောင်းလေးများဖြင့် ညင်သာစွာသုတ်လိမ်းပေးပါ။ မနက်အိပ်ရာထတဲ့အခါမှတော့ ရေဖြင့်ပြန်ဆေးချပေးပါ။ဒီအရောအနှောကတော့ မျက်ခုံးမွှေးကနဂိုအတိုင်းပြန်ဖြစ်ကာ သန်စွမ်းလာစေတဲ့အပြင် ဆံသားကိုလည်း ချောမွေ့တောက်ပြောင်စေပါတယ်။
ကြက်သွန်နီရည်ဆိုလို့ အံသြသွားလားမသိဘူး။ဒါပင်မယ့်လည်း ကြက်သွန်နီရည်ရဲ့အစွမ်းကတော့ အံ့မခန်းပဲနော်။သူရဲ့အစွမ်းတွေကတော့ မျက်ခုံးအတွက်တင်မဟုတ်ဘဲ ဆံသားတွေကသန်စွမ်းစေရုံသာမက ဆံပင်မွေးညင်းပေါက်တွေကိုအားဖြည့်ပေးပါကာ ဆံပင်ရှည်မြန်အောင်ကူညီပေးပြီး ဆံသကသာတောက်ပြောင်စေပါတယ်။သေးငယ်တဲ့ ကြက်သွန်နီတစ်လုံးကိုယူကာ လှီးပြီးနောက် အရည်ညှစ်ယူပါ။ ထိုအရည်ကို မျက်ခုံးမှာလိမ်းပေးပြီး ၅ မိနစ်လောက်နှိပ်နယ်ပေးပါ။ထိုနောက်ရေဆေးချပြီး ရေအေးအေးလေးသုံးကာ ပုံမှန်သစ်နေကျ မျက်နှာသစ်ဆေးနဲ့သစ်ပေးပါ။ ဒါမှမဟုတ် ကြက်သွန်နီကိုတစ်ခြမ်းကိုလှီးပြီး မျက်ခုံးပေါ် ပွတ်တိုက်ပေးလို့လည်းရပါတယ်။
နွားနို့မှာ ပရိုတိန်း၊ ဗီတာမင်ဘီ၊ လက်တစ်အက်စစ် နှင့် ကယ်လ်ဆီယမ်ပါဝင်တာကြောင့် မျက်ခုံးကောင်းအောင်အသုံးပြုနိုင်ရုံသာမက ဆံသားကောင်းမွန်အောင်လည်း ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဂွမ်းဖတ်လေးကို နွားနို့ထဲနှစ်ပြီး မျက်ခုံးပေါ်သုတ်လိမ်းပေးပါ။ မျက်ခုံးပေါ်မှာရှိတဲ့ နွားနို့လေးတွေ ခြောက်သွားတဲ့အခါ ပုံမှန်သစ်နေကျမျက်နှာသစ်ဆေးနှင့် ပြန်သစ်လိုက်ရင်ရပါတယ်။
သံပုရာသီးက ဗီတာမင်မြောက်မြားစွာပါဝင်တဲ့အပြင် အင်တီအောက်ဆီဒင့်လည်းပါဝင်တဲ့အတွက် မျက်ခုံးမွှေးတွေရှည်လျားသန်စွမ်းအောင်ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ သံပုရာသီးကိုတစ်စိတ်လှီးပြီး မျက်ခုံးမွှေးလမ်းကြောင်းအတိုင်း ပွတ်ပေးပါ။ ၁၅ မိနစ် မိနစ်၂၀ လောက်ကြာသွားတဲ့အခါမှာ ရေဆေးချလို့ရပါတယ်။ ဒါအပြင် သံပုရာသီးအခြမ်းလေးတွေနှင့် အုန်းဆီခွက်တစ်ဝက်လောက်ကို ရောနှောကာ ၁၅ ရက်လောက်အေးမြတဲ့နေရာမှာထားပြီးနောက် ညအိပ်ရာဝင်ခါးနီးတိုင်း မျက်ခုံးပေါ်မှာသုတ်လိမ်းပေးလို့ရပါတယ်။
(၆) Essential Oil
Essential Oil များဖြစ်ကြတဲ့ tea tree (သို့) lavender oil တွေက ရေဓာတ်ပေါများပြီး အေးမြ အားပြည့်စေတဲ့အစွမ်းရှိတာကြောင့် သူတို့ကို အုန်းဆီ၊ သံလွင်ဆီ၊ ကြက်ဆူဆီတို့နဲ့ရောနှောကာ ရရှိလာတဲ့အရောအနှောကို မျက်ခုံးပေါ်သုတ်လိမ်းပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း နှိပ်နယ်ပေးပါ။သတိပြုရမှာကတော့ မသုတ်လိမ်းခင်မှာ တည့်မတည့်ကို လက်ပေါ်တင်ပြီးစမ်းကြည့်သင့်ပါတယ်။
ကြက်ဥအနှစ်မှာပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင်နှင့် ပရိုတင်းဓာတ်တွေက မျက်ခုံးမွှေးရှည်လျားထူထဲလာအောင် ကူညီပေးပါတယ်။ကြက်ဥအနှစ်ကိုယူကာ အမြှုပ်ထအောင်မွှေပြီးနောက် မျက်ခုံးပေါ်သုတ်လိမ်းပေးပါ။၁၅-၂၀ မိနစ်လောက်ထားပြီးနောက် ရေဆေးချလိုက်လို့ရပါတယ်။
Vaseline ကမျက်ခုံးမွှေးကို ရေဓာတ်ပြည့်ဝစေဖို့အတွက် အသုံးပြုလို့ရသလို မျက်ခုံးမွှေးသန်စွမ်းလာအောင်နဲ့ စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မျက်ခုံးပုံစံရရှိအောင် လည်းစွမ်းဆောင်ပေးပါတယ်။ Vaseline ကို Mascara ဘရပ်ရှ် (သို့) နားကြပ်တံလေးဖြင့်ယူကာ မျက်ခုံးလမ်းကြောင်းအတိုင်း သုတ်လိမ်းပေးပါ။ ဒါမှမဟုတ် Vaseline ကို ကြက်ဆူဆီ၊ သံလွင်ဆီ ၊ ရှားစောင်းလက်ပတ်၊ Essential Oil၊ နွားနို့တို့နှင့် ရောစပ်ပြီးလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သန့်စင်တဲ့ Mascara ဘရပ်ရှ် (သို့) ဘီးကိုယူပြီး မျက်ခုံးမွှေးအတိုင်း အပေါ် အောက် ရွေ့လျားကာ နှာရိုးကနေ နားထင်နားအထိ ဖြည်းညင်းစွာ နှိပ်နယ်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် သင့်ရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ မျက်ခုံးမွှေးကို ညင်သာစွာနှိပ်နယ်ပေးလို့ရပါတယ်။ မျက်ခုံးမွှေးရဲ့အလယ်နေရာကိုဖိပြီး လက်ချောင်းကိုမလွှတ်ဘဲ စက်ဝိုင်းပုံစံ ဖြည်းဖြည်းချင်းနှိပ်နယ်ပေးပါ။ အခြားတစ်ဖက်ကိုလည်း အလားတူပုံစံအတိုင်းလုပ်ပေးပါ။ထိုကဲ့သို့နှိပ်နယ်ပေးခြင်းက သွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းစေတဲ့အပြင် အာဟာရဓာတ်ကိုစုပ်ယူဖို့လှုံဆော်ပေးပြီး ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့် မျက်လုံးညောင်းညာခြင်းကိုလည်း သက်သာစေပါတယ်။
အချိန်ကုန်သက်သာပြီး ငွေကုန်ကြေးကျလည်းအရမ်းမများဘဲ လွယ်ကူလျင်မြန်တဲ့ သဘာဝနည်းလမ်းလေးတွေအတိုင်းလုပ်ဆောင်ပြီး သန်စွမ်းလှပတဲ့ မျက်ခုံးတစ်စုံကို ပိုင်ဆိုင်ရရှိနိုင်မှာပါ။
လှပတဲ့မကျြခုံးတဈစုံရရှိစဖေို့ လှယျကူမွနျဆနျတဲ့ နညျးလမျး(၉) သှယျ
လှပတဲ့မကျြခုံးတဈစုံရှိခွငျးက ကိုယျရဲ့နဂိုရှိရငျးစှဲမကျြနှာလေးကို အမြားအလယျမှာ သိသာထငျရှားစပေါတယျ။အခုခတျေမှာလညျး မကျြခုံးအလှကို မိနျးကလေးအမြားစုက ပိုမိုဂရုစိုကျလာကွပါတယျ။အဲလိုဂရုစိုကျလာတာနဲ့အညီ ထငျးထငျးလေးနဲ့ လှပသသေပျပွီး ပွီးပွညျ့စုံတဲ့မကျြခုံးတဈစုံရရှိစဖေို့အတှကျ ပွုလုပျလာကွပါတယျ။ အခုဖျောပွမညျ့နညျးလမျးလေးတှကေ Beauty Saloon တှေ အပွေးအလှားသှားစရာမလိုတဲ့အပွငျ လှယျလှယျကူကူနဲ့ အခြိနျလညျးအရမျးပေးစရာမလိုဘဲ အိမျမှာပဲပွုလုပျပွီး အခြိနျတိုလေးအတှငျးမှာ မကျြခုံးလှလှတဈစုံ ရရှိစမေယျ့နညျးလမျးလေးတှဖွေဈပါတယျ။
(၁) Oil တှရေဲ့အစှမျး
သေးငယျတဲ့ဖနျပုလငျးထဲကို တူညီတဲ့ပမာဏရှိတဲ့ အုနျးဆီ နှငျ့ ကွကျဆူဆီကိုရောနှောထညျ့ကာ စားပှဲတငျဇှနျးတဈဇှနျးစာ ထောပတျသီးအဆီ ထညျ့ကာ ပါဝငျပစ်စညျးတှတေဈသားထဲဖွဈသှားတဲ့အထိ မှပေေးပါ။ ရရှိလာတဲ့ အရောအနှောကို Mascara ဘရပျရျှ(သို့) သငျ့ရဲ့လကျခြောငျးလေးမြားကိုအသုံးပွုပွီး မကျြခုံးမှေးပျေါသုတျလိမျးပေးပါ။ဒီနညျးလမျးက မကျြခုံးမှေးကိုသနျစှမျးလာစရေုံမက မကျြတောကျမှေးကိုပါ ရှညျလြားလာစပေါတယျ။
ရှားစောငျးလကျပတျ စားပှဲတငျဇှနျး ၁ ဇှနျးစာ၊ ကွကျဆူဆီ စားပှဲတငျဇှနျး ၂ ဇှနျးစာ နှငျ့ ဗီတာမငျအီး ၂ တောငျ့စာကို ရောနှောပေးပါ။ ထို့နောကျ အိပျရာမဝငျခငျမှာ ဘရပျရျှ (သို့) သငျ့ရဲ့လကျခြောငျးလေးမြားဖွငျ့ ညငျသာစှာသုတျလိမျးပေးပါ။ မနကျအိပျရာထတဲ့အခါမှတော့ ရဖွေငျ့ပွနျဆေးခပြေးပါ။ဒီအရောအနှောကတော့ မကျြခုံးမှေးကနဂိုအတိုငျးပွနျဖွဈကာ သနျစှမျးလာစတေဲ့အပွငျ ဆံသားကိုလညျး ခြောမှတေ့ောကျပွောငျစပေါတယျ။
ကွကျသှနျနီရညျဆိုလို့ အံသွသှားလားမသိဘူး။ဒါပငျမယျ့လညျး ကွကျသှနျနီရညျရဲ့အစှမျးကတော့ အံ့မခနျးပဲနျော။သူရဲ့အစှမျးတှကေတော့ မကျြခုံးအတှကျတငျမဟုတျဘဲ ဆံသားတှကေသနျစှမျးစရေုံသာမက ဆံပငျမှေးညငျးပေါကျတှကေိုအားဖွညျ့ပေးပါကာ ဆံပငျရှညျမွနျအောငျကူညီပေးပွီး ဆံသကသာတောကျပွောငျစပေါတယျ။သေးငယျတဲ့ ကွကျသှနျနီတဈလုံးကိုယူကာ လှီးပွီးနောကျ အရညျညှဈယူပါ။ ထိုအရညျကို မကျြခုံးမှာလိမျးပေးပွီး ၅ မိနဈလောကျနှိပျနယျပေးပါ။ထိုနောကျရဆေေးခပြွီး ရအေေးအေးလေးသုံးကာ ပုံမှနျသဈနကြေ မကျြနှာသဈဆေးနဲ့သဈပေးပါ။ ဒါမှမဟုတျ ကွကျသှနျနီကိုတဈခွမျးကိုလှီးပွီး မကျြခုံးပျေါ ပှတျတိုကျပေးလို့လညျးရပါတယျ။
နှားနို့မှာ ပရိုတိနျး၊ ဗီတာမငျဘီ၊ လကျတဈအကျစဈ နှငျ့ ကယျလျဆီယမျပါဝငျတာကွောငျ့ မကျြခုံးကောငျးအောငျအသုံးပွုနိုငျရုံသာမက ဆံသားကောငျးမှနျအောငျလညျး ထိနျးသိမျးနိုငျပါတယျ။ ဂှမျးဖတျလေးကို နှားနို့ထဲနှဈပွီး မကျြခုံးပျေါသုတျလိမျးပေးပါ။ မကျြခုံးပျေါမှာရှိတဲ့ နှားနို့လေးတှေ ခွောကျသှားတဲ့အခါ ပုံမှနျသဈနကေမြကျြနှာသဈဆေးနှငျ့ ပွနျသဈလိုကျရငျရပါတယျ။
သံပုရာသီးက ဗီတာမငျမွောကျမွားစှာပါဝငျတဲ့အပွငျ အငျတီအောကျဆီဒငျ့လညျးပါဝငျတဲ့အတှကျ မကျြခုံးမှေးတှရှေညျလြားသနျစှမျးအောငျပွုလုပျပေးပါတယျ။ သံပုရာသီးကိုတဈစိတျလှီးပွီး မကျြခုံးမှေးလမျးကွောငျးအတိုငျး ပှတျပေးပါ။ ၁၅ မိနဈ မိနဈ၂၀ လောကျကွာသှားတဲ့အခါမှာ ရဆေေးခလြို့ရပါတယျ။ ဒါအပွငျ သံပုရာသီးအခွမျးလေးတှနှေငျ့ အုနျးဆီခှကျတဈဝကျလောကျကို ရောနှောကာ ၁၅ ရကျလောကျအေးမွတဲ့နရောမှာထားပွီးနောကျ ညအိပျရာဝငျခါးနီးတိုငျး မကျြခုံးပျေါမှာသုတျလိမျးပေးလို့ရပါတယျ။
Essential Oil မြားဖွဈကွတဲ့ tea tree (သို့) lavender oil တှကေ ရဓောတျပေါမြားပွီး အေးမွ အားပွညျ့စတေဲ့အစှမျးရှိတာကွောငျ့ သူတို့ကို အုနျးဆီ၊ သံလှငျဆီ၊ ကွကျဆူဆီတို့နဲ့ရောနှောကာ ရရှိလာတဲ့အရောအနှောကို မကျြခုံးပျေါသုတျလိမျးပွီး ဖွညျးဖွညျးခငျြး နှိပျနယျပေးပါ။သတိပွုရမှာကတော့ မသုတျလိမျးခငျမှာ တညျ့မတညျ့ကို လကျပျေါတငျပွီးစမျးကွညျ့သငျ့ပါတယျ။
ကွကျဥအနှဈမှာပါဝငျတဲ့ ဗီတာမငျနှငျ့ ပရိုတငျးဓာတျတှကေ မကျြခုံးမှေးရှညျလြားထူထဲလာအောငျ ကူညီပေးပါတယျ။ကွကျဥအနှဈကိုယူကာ အမွှုပျထအောငျမှပွေီးနောကျ မကျြခုံးပျေါသုတျလိမျးပေးပါ။၁၅-၂၀ မိနဈလောကျထားပွီးနောကျ ရဆေေးခလြိုကျလို့ရပါတယျ။
Vaseline ကမကျြခုံးမှေးကို ရဓောတျပွညျ့ဝစဖေို့အတှကျ အသုံးပွုလို့ရသလို မကျြခုံးမှေးသနျစှမျးလာအောငျနဲ့ စှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ မကျြခုံးပုံစံရရှိအောငျ လညျးစှမျးဆောငျပေးပါတယျ။ Vaseline ကို Mascara ဘရပျရျှ (သို့) နားကွပျတံလေးဖွငျ့ယူကာ မကျြခုံးလမျးကွောငျးအတိုငျး သုတျလိမျးပေးပါ။ ဒါမှမဟုတျ Vaseline ကို ကွကျဆူဆီ၊ သံလှငျဆီ ၊ ရှားစောငျးလကျပတျ၊ Essential Oil၊ နှားနို့တို့နှငျ့ ရောစပျပွီးလညျးအသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
သနျ့စငျတဲ့ Mascara ဘရပျရျှ (သို့) ဘီးကိုယူပွီး မကျြခုံးမှေးအတိုငျး အပျေါ အောကျ ရှလြေ့ားကာ နှာရိုးကနေ နားထငျနားအထိ ဖွညျးညငျးစှာ နှိပျနယျပေးနိုငျတဲ့အပွငျ သငျ့ရဲ့လကျခြောငျးလေးတှနေဲ့ မကျြခုံးမှေးကို ညငျသာစှာနှိပျနယျပေးလို့ရပါတယျ။ မကျြခုံးမှေးရဲ့အလယျနရောကိုဖိပွီး လကျခြောငျးကိုမလှတျဘဲ စကျဝိုငျးပုံစံ ဖွညျးဖွညျးခငျြးနှိပျနယျပေးပါ။ အခွားတဈဖကျကိုလညျး အလားတူပုံစံအတိုငျးလုပျပေးပါ။ထိုကဲ့သို့နှိပျနယျပေးခွငျးက သှေးလညျပတျမှုကိုကောငျးစတေဲ့အပွငျ အာဟာရဓာတျကိုစုပျယူဖို့လှုံဆျောပေးပွီး ခေါငျးကိုကျခွငျးနှငျ့ မကျြလုံးညောငျးညာခွငျးကိုလညျး သကျသာစပေါတယျ။
အခြိနျကုနျသကျသာပွီး ငှကေုနျကွေးကလြညျးအရမျးမမြားဘဲ လှယျကူလငျြမွနျတဲ့ သဘာဝနညျးလမျးလေးတှအေတိုငျးလုပျဆောငျပွီး သနျစှမျးလှပတဲ့ မကျြခုံးတဈစုံကို ပိုငျဆိုငျရရှိနိုငျမှာပါ။
အမျိုးသားတွေအတွက် သီးသန့်ကျင်းပပေးခဲ့တဲ့ L’Oréal Paris ရဲ့ Men Expert Event ပွဲကြီး
by Kyaw Soe Aung . 14 hours ago
David Beckham နဲ့ တူအောင် ပေါင် ၃၃,၀၀၀ အကုန်အကျခံပြီး Plastic Surgery လုပ်တဲ့ Jack Johnson
by Htet Htet . 14 hours ago
မြင်လိုက်တာနဲ့ ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ ခန့်မှန်းလို့ရတဲ့ ရုပ်ရှင်ခေါက်ရိုးကျိုးဇာတ်ကွက်များ
by yoelu . 15 hours ago
ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုမှာ ပြိုင်စံရှားတဲ့ ဘီလျံနာကြီးတွေက ဘယ်သူတွေလဲ
by Kyaw Soe Aung . 16 hours ago
သဘာဝအတိုင်း မျက်နှာရှိ အဆီတွေကျပြီး သွယ်လျလှပတဲ့ မျက်နှာလေးကို ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့
by Htet Htet . 17 hours ago
လိုအပ်နေတဲ့ နိုင်ပွဲကိုရယူပြီး နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လှမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့ လီဗာပူးလ်
ကွင်းအမည်ကို ဂန္ထ၀င်တွေရဲ့ နာမည်သတ်မှတ်ပေးခဲ့တဲ့ အသင်းများ
ညအလှကို ပြတ်သားစွာပုံဖော်ပေးမယ့် OPPO R17 Pro ကို ၈၉၉,၉၀၀ကျပ်နဲ့ ဝယ်ယူကြမယ်
လီဗာပူးလ် ဂန္ထ၀င်တွေ ပြောပြတဲ့ မမေ့နိုင်စရာ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်များ
All Rights Reserved ©2018 Akhayar Media